कोरोनासँग लड्दै गरेकी नेपाली भन्छिन्‌,- निको हुने छाँटकाँटै छैन, सबैले सा,बधानी अपनाउनुस्‌ ! « Etajakhabar
कोरोनासँग लड्दै गरेकी नेपाली भन्छिन्‌,- निको हुने छाँटकाँटै छैन, सबैले सा,बधानी अपनाउनुस्‌ !
प्रकाशित मिति : १० चैत्र २०७६, सोमबार १३:२५
काठमाडौं । बेलायतमा एक नेपालीमा कोरोनाभाइरसको सं,क्रमण देखिएको छ । कोरोना सं,क्रमित एक नेपाली महिलाले आफु निकै पी,डादायक रहेको बताएकी छिन् ।
उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत आफु कोरोनासंग ल,डिरहेको र १३ दिन सम्म पनि निको हुने छॉ,ट्काट नभएको बताएकी छिन् । साथै उनले सं,क्रमण भएपछि आफू १० दिनसम्म सेल्फ आइसोलेसनमा बसेको र छिट्टै निको हुने सम्भावना नभएको बताउदै सबै सावधान रहन आग्रह गरेकी छिन् ।
उनले आफ्नो फेसबुकमा लेखेकी छिन्‌, ‘१० दिनको सेल्फ़ आइसोलेसन पछि COVID 19 सँग लड्दै !! यो महामा,री कति पी,डादायक हुँदो रहेछ, आज १३ दिनसम्म पनि निको हुने छाँट्काटै छैन, फ़ेसबुकमा राख्ने सोच थिएन, कतै आफन्त अनि साथीभाईलाई थप भयावह बनाउला भन्ने लाग्यो, तर सोचेँ। सबैले सा,बधानी अपनाउन सक्नुहुनेछ । हजुरहरू सबैलाई विशेष सावधान रहन अनुरोध गर्दछु।’